Gnome 3.34 inowanikwa nekuvandudza kukuru uye nhau | Linux Vakapindwa muropa
Gnome 3.34 inowanikwa nenhau huru
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, GNU/Linux
Iyi vhezheni itsva yakatumidzwa zita reTesaronika. Mutero kuguta kwakaitirwa musangano wekupedzisira wevagadziri.
Gnome 3.34 inowanikwa nenhau huru. Mhedzisiro yemwedzi mitanhatu yebasa rakasimba (zvirinani ndizvo vanovimbisa mukushambadzira) isu tichazviona sekushandurwa kutsva kwezvikamu izvo zvinovasunungura nguva nenguva, kana sevaya vanosarudza iyo Rolling Release modhi yakagadziridzwa.
Vagadziri vacho vanovimbisa kuvandudza kwakawanda kwekuita.
1 Gnome 3.34 inowanikwa uye izvi ndozvazvinounza kwatiri
1.4 Gnome 3.34 inowanikwawo kune vanogadzira
1.5 Uye handizvo chete, vanhu.
Gnome 3.34 inowanikwa uye izvi ndozvazvinounza kwatiri
Ose desktop uye akasiyana maficha ane chimiro chitsva. Iyo kesi ye desktop desktop yekusarudza chishandiso inomira pachena, ine zvigadziriso zvinoita kuti zvive nyore kusarudza zvakasarudzika mapikicha.
Iyi pani nyowani inoratidza pfupiso yemari yakashandiswa pane desktop uye kiya sikirini. Tsika kumashure dzinogona kuwedzerwa uchishandisa bhatani Wedzera mufananidzo ....
Gnome 3.34's nyowani yekumashure yekushandisa chishandiso inoita kuti zvive nyore kusarudza yakasarudzika Wallpaper.
Zvimwe zvakagadziridzwa zvinosanganisira yekutsvaga munda, iyo login password password uye kuongororwa kwemuganhu wakaratidzwa wehwindo.
Gnome 3.34 inotiunzira a nyowani ficha inonzi 'tsika maforodha«. Ingo dhonza imwe icon icon pane imwe kuti ugadzire dhairekodhi. Mafolda anodzimwa otomatiki kana zvidhori zvese zvadhonzerwa mukati mawo.
Tinogona kuodha zvinhu pane desktop yedu nekungodhonza imwe icon pane imwe. Izvi zvinobva zvagadzira faira.
Kunyangwe vanhu vazhinji vasingazvizive, Gnome ine browser yayo inonzi Webhu. Zvino mawebhu maitiro akave ari ega. Uku kurambidzwa kunogumira kuwana kwewebhu maitiro kune nzvimbo dzinodiwa kumhanya webhu browser.
Kune rimwe divi, tabo dzinogona kubatanidzwa. Anodiwa matabo anogona kupetwa mune iyo tabu runyorwa pasina kurasika kana uchivhara browser
Iyo yekushambadzira blocker ikozvino shandisa zvirimo mafirita eWebhuKit inopa injini, nekudaro uchiwana kugona kukuru.
Iyo Gnome projekiti webhu bhurawuza inounza kuchengetedzeka kwekuvandudza, kuvharidzira kushambadzira uye kubata tab.
MuGnome 3.34 retro mutambo wemitambo zvino zvinogoneka ponesa akawanda mativi pamutambo uye kuendesa kunze kunoshandiswa mune zvimwe zvivakwa.
Iye zvino unogona kuenderera mutambo weyaunofarira retro mutambo chero nguva uye chero kwaunoda.
Zvikamu zvekodhi yemimhanzi player zvakanyorwa zvekare. Kugadziriswa kunoita kuti zvikwanisike kutamba kunononoka. Izvi zvakakosha pakuteerera maalbham ayo ezvinangwa zvekutora akapatsanurwa kuita matraki asi anga achifanirwa kunzwikwa seyese
Marongerwo ealbum, muimbi, uye playlist maonero akachinjwa kuti zvive nyore kuwana zvatiri kutsvaga. Zvakare, iko kunyorera kunoongorora zvirimo mumafaira akasarudzwa kuti dzigadzirise zvigadziriswe.
Pamusoro pekuvandudza kuratidzwa kwenziyo, iko kunyorera kwemimhanzi iko zvino kunogona kuridza mushe pakati penzira.
Gnome 3.34 inowanikwawo kune vanogadzira
Kunyatsokundikana kuyedza kwekugadzira yakavhurwa sosi nhare yekushandisa sisitimu yakaratidzirwa, kiyi yezvinhu zvese kuve nemaapplication akanaka. Ndokusaka Gnome yakafunga kuvandudza maturusi ayo evagadziri vechirongwa.
Kuvandudza data profiling yeapplication, mamwe masosi edata akaverengerwa muSysproof. Pamusoro pezvo, Builder, yeprojekti yakasanganiswa yekuvandudza nharaunda, yakavandudzwa. Zvino zvave yakabatanidzwa D-Bus muongorori.
Uye handizvo chete, vanhu.
Mifananidzo mitsva yakagadzirirwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira Mifananidzo, Vhidhiyouye Dzakamirira mabasa.
MuTerminal unogona kunyora kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, kubva kurudyi kuenda kuruboshwe, kana mativi ese ari maviri.
Yekukurumidza icon caching uye kurodha semhedzisiro yekugadzirisa mamwe maficha mune yekutarisa.
Yambiro inoratidzwa kana uchiedza kuteedzera faira kune yekunyora-yakachengetedzwa dhairekitori.
Basa rekuona nzvimbo yekunongedzera rave kutsigirwa neWayland graphical server.
Iko mukana wekumisa iyo "inoshanda kona" basa rakagoneswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Gnome 3.34 inowanikwa nenhau huru
Iwe murume, nhau huru kwete. GNOME vashandisi vajaira chokwadi chekuti mufaro unouya mukati (chaizvo) madiki madhishi.
Uye ini ndinotaura izvi seGNOME mushandisi, uyo kunyangwe zvese ini ndichiri kuziva kuti ndiyo inogadzira uye inogarika desktop.
Kwemakore angu eGnome apfuura yakauya nekusuwa mumidziyo yemhuri yakakura.
Huawei yakafumura yekutanga 5G chip yemidziyo yayo
Python Software Foundation Inozivisa Kupera Zuva rePython 2 Tsigiro